Android 12 yekutarisa: iyo inonakidza kwazvo yekuvandudza mumakore
Kuru Nhau & Ongororo Kuongorora kwe Android 12: Iyo inonakidza kwazvo yekuvandudza mumakore
Kuongorora kwe Android 12: Iyo inonakidza kwazvo yekuvandudza mumakore
Hei, unoita sei kuti ive yakakura sisitimu yekushandisa nyowani uye inonakidza zvakare? Bvunza Google, sezvo Android 12 ichiita izvo chete. Yakavhurwa zviri pamutemo mazuva mashoma apfuura, Android 12 inotirova nezviratidzo zvinozorodza izvo zvinopa iyo inoshanda system matani eanodiwa-hunhu. Kunze kwejasi idzva rependi rakasaswa pese pese pechimiro uye nemamenyu akasiyana siyana, kune akawanda matsva ehunhu-hwe- hupenyu hunovandudzwa uye hunofungidzirwa mashandiro pamwe nekuvandudzwa kwekuvanzika uye kuchengetedzeka. Ah, uye mashandiro akave akagadziridzwa zvakanyanya nekuda kwekumwe kugadzirisa pasi pehodhi.
Disiki: Zvizhinji zvezvinhu zvitsva zvakaratidzirwa padanho aren & apos; hazvigare mune yazvino yekuvandudza beta uye zvichazosvika nekubuditswa kwe beta. Nekuda kwehupfupi, isu & maapos takasarudza kutaura izvi mune ino yekutarisa.
Android 12 kuburitsa zuva
Android 12 ichauya gare gare gore rino, asi yekutanga yeruzhinji beta iri kurudyi kukona. Muchokwadi, vashandisi vane hunyanzvi vanonzwa sekupa Android 12 & apos; s mitezo mitsva spin inogona kuikanda kutanga nhasi. Iyo beta inowanikwa paGoogle & apos; ayo maPixels pamwe necheni yemamwe madhiraivhiti kubva kuASUS, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, TCL, vivo, Xiaomi, uye ZTE. Unogona kuona kana chishandiso chako chakakodzera nekutevera chinongedzo pazasi. Google yakaburitsa yakatarwa nguva yekuburitswa kwe beta uye yakatarwa kugadzikana kwepuratifomu yeiyo software yekuvandudza, iyo inofanirwa kuwanikwa mukupera kwezhizha. Apa ndipo apo isu & apos; tichitarisira kuti Android 12 ipfuurire kumutsetse wePixel.
Tora Android 12 beta pane yako kifaa
Android 12 Zvekare Zviratidzo
Kubva panguva yangu ipfupi neiyo yazvino beta, ma & apos; ekukurumidza kuti atore chero mhedzisiro sezvo mazhinji ezvinhu zvinonakidza zvitsva ari kusuwa zvinosiririsa. Asi chirevo chechigadzirwa chitsva chiripo. Ruzhinji rwekuvandudza uye hutsva hutsva hunoshanda hunosvika pane inotevera zuva, asi izvo zviripo seti inoratidzira inonakidza pikicha - ine chinzvimbo Android yekuvandudza iyo inodzvinyirira ingangoita zvese zvechiitiko. Ichokwadi, hapana & apos; s haina vimbiso yeshanduko idzi dzese dzinozoitwa pane ese anoenderana Android zvishandiso pasi pemutsara; hapana & apos; hapana kutaura kana zvinoonekwa zvichichinja, semuenzaniso, zvicharemekedzwa neSamsung kana OnePlus, asi chinhu chimwe & maapos - vevamwe - Vashandisi vePixel vari kurapa. Zvirokwazvo, hapana & maapos akakwana, uye zvirokwazvo zviriko zvinhu zvandisingade, senge yakaganhurirwa pasi yevana Zvirongwa menyu, asi iwe unofanirwa kutora izvo zvakanaka pamwe nezvakaipa.
Android 12 Dhizaini: Chinyorwa Iwe
Dhizaini pasina kupokana ndiyo hukuru hukuru neiyo Android 12, uye mutauro mutsva wekugadzira unotakura oh-so-inotapira 'Zvinhu Iwe' moniker. Iwo matsva maficha ekuratidzira anotamba uye akasimba, achiunza chinodikanwa chinodikanwa kune kutaridzika kweiyo inoshanda sisitimu. Kwakaenda kunodzora kwese-kunosanganisira machena machena, mune ane akacheneruka, pastel kumashure ayo anoita zvinyorwa, mifananidzo, uye -zviratidziro zvemukati zvinobuda apo panguva imwe chete ichiwedzera inodikanwa kwazvo yekupenya kwemavara mukati mechimiro chose. Iyo pendi yemavara inozochinja otomatiki zvichienderana nepepuru iwe yawakaisa kune inoenderana kubatana chiitiko chekuona. Zvinosuruvarisa, chimiro ichi hachina kugoneswa pane beta iyo yatinowana yekutamba nayo, asi zvakadaro, ichave shanduko inodiwa kwazvo kune yekushandisa system.
Android 12 Chinyorwa Unogadzira mutauro
Nekuda kwechinhu chakadanwa Ruvara Kucherwa, Android inozozvionera wega kuti ndeapi mavara ari akakosha uye ndeapi anowirirana, kupenda pamusoro pemumvuri wekuzivisa, iyo yekuvharira sikirini, idzva vhoriyamu kudzora, iwo matsva majeti uye zvimwe zvakawanda. Asi vara harisi zvese. Google yakasasawo matani emifananidzo nyowani inotsetsenura inomutsa kuwirirana kwehunyoro mukati mechimiro chose. Ini handigoni & kumirira kuti ndiedze chimiro ichi, asi Google ichiri kuzoshandisa mune ramangwana beta.
Kunze kweruvara uye kufamba, iwo maratidziro pachawo akachinjwa zvakanyanya. Kune imwe, iyo Inokurumidza Maseru pani yakagadziridzwawo: inopenya inotsvedza zvino yagara kumusoro kwemumvuri wekuzivisa uye yakashinga uye yakakura kukunda pakutanga. Iwo anokurumidza marongero mataera izvozvi angori mana chete kana iyo mumvuri wekuzivisa isn & apos; isina kunyatsokura, ichigadzira chimiro chakachena. Svetera pasi zvakare uye mamwe mana akakosha mataira anokukwazisa. Ehezve, iyo iripo Kutamba mimhanzi widget ichiripo kana ichidikanwa, ichikupa iwe nyore kuwana kune yako mimhanzi kana podcast. Google Bhadhara uye Kumba Kudzora zvakare maviri akakosha anouya matsva kune iyo ziviso pane.
Izvo zviziviso izvozvi zvino zvinowoneka pamusoro peiyo opaque kumashure uye bundle pamwechete kana izvo zvine musoro. Nemakona akapoteredzwa uye mashoma mashoma ekuona, zviyeuchidzo zvinoratidzika zvakachena zvakanyanya kupfuura nakare uye zvino zvinoita sechikamu chakakosha chemumvuri wekuzivisa uye kana chimwe chinhu chinonamira ipapo kwechinguva. Notifications kubva mapplication maapplication achiri kuoneka sekutaurirana, zvichikubvumidza iwe kuti uenderere mberi nekutaura pasina kumbobvira kuvhura iyo yekuvavarira mameseji app.
Iyo Zvirongwa menyu yakarova zvakare imwe visual revamp, asi ini ndiri chokwadi kusahadzika nezve iyi sezvo inotaridzika uye ichinzwa senge nhanho kumashure. Kune imwe, iyo nyowani yeMenu yeMenyu inotaridzika yakachena, asi kuongororwa kwekubatsira kweruzivo uko kwakapararira pasi pemapoka mazhinji zvino zvaenda zvinosuruvarisa. Mune apfuura Android shanduro, iwe waigona kuona zvakananga kuti yakawanda sei yawaive nayo, kana kuti ingani iyo yazvino bhatiri nhanho yaizokugarisa iwe, asi Android 12 inodzosera kumashure pane iro rekuwedzera ruzivo kuti uratidzike kuchena, ndinofungidzira, zvese nepo zvichiri zvishoma kubatsira kupfuura pakutanga .
Kwidziridzo: Android 12 beta 2 yakaunzira isu toga-yakatarisana matoggogi anga asipo kubva beta 1.
Android 12 vs Android 10 menyu yekumisikidza
Google neSamsung timu kumusoro kuti ipe yakatsanangurwazve smartwatch chiitiko
Google Mepu inowana nyowani maficha paI / O 2021
Mifananidzo yeGoogle yakagadziridzwa neRinokiyiwa Folder chimiro
Android 12 Yakavanzika uye Chengetedzo
Google yakatarisana nekuchengetedzeka uye zvakavanzika zvakanyanya panguva yekuvhura Google I / O kiyi. Kune matsva eIOS-kunge zvakavanzika zviratidzo mukona yekumusoro yekurudyi izvo zvichanyatsoratidza kana kamera yako kana maikorofoni iri kunyatso shandiswa neimwe app. Kubaya pamifananidzo iyi kunokuudza chaizvo mapurogiramu ari kushandisa maikorofoni uye kamera pafoni yako. Matera maviri matsva muKurumidza Zvirongwa anotendera mushandisi kuvhara chero maikorofoni, kamera, kana zvese kubva pakuwanikwa nehurongwa hwese, izvo zvinofanirwa kuunza zororo rerunyararo rwepfungwa kune vanoziva zvakavanzika. Hapana chiratidzo chechinhu ichi mune yazvino beta zvakadaro.
Chimwe chinhu chinovanzika-chekuziva ndechekuvanzika Dashibhodhi, iyo inokuratidza zviri nyore kuti ndeipi data iri kuwanikwa, kangani uye neapi maapp. Iwe unogona zvakare kudzora zviri nyore kupihwa kupihwa kupihwa mvumo yeapp yakananga kubva padheshibhodhi kuti uzive izvo & apos zviri kuitika nefoni yako zvakavanzika-zvine hungwaru uye kudzora musoftware isina kunaka.
Nzvimbo yekuwana yakagadziridzwa zvakare. Vashandisi vachapihwa sarudzo yekupa maapplication chaiwo kana nzvimbo yekufungidzira kana vakumbirwa mvumo yenzvimbo. Iyo yekukurumidza haina & apos; haioneke mune iripo iripo beta, asi kana iwe ukaenda kune yakatsaurirwa app info peji kune chero app, iwe unogona kuramba iyo chaiyo nzvimbo.
Chekupedzisira, pane & apos; iyo nyowani Android Yakavanzika Computer Koreji. Ichi chiitiko chinogonesa Google kuita akasiyana mabasa pachishandiso pachayo uye kuvimba kunyangwe zvishoma pane iro gore. Semuenzaniso, Rarama Caption, Iyezvino Kutamba uye Smart Reply zvese zvichaitika pane yako foni uye hazvizokwanise kusvika maGoogle & apos; ruoko rwunobatsira.
Android 12 Kuita
Zvakanaka, Google yakazviita zvakare. Gore rega rega uye Android inowedzera uye nekukurumidza, uye iwe kubheja Android 12 haina kusiyana. Kutenda kuomarara pasi-hood kuvandudzwa kwaita kuti Android 12 ikurumidze uye iteerere nesimba riri nani pamusoro payo kana ichienzaniswa ne Android 11. Google yakawana sei izvi? Pasina kuregedza tekinoroji matauro, Google inoenda zvakadzama nezve kufambira mberi mukuita uye kugona. Semuenzaniso, Google inoti iyo CPU nguva inodiwa yepakati system masevhisi yakadzikiswa neanosvika makumi maviri nemasere% panguva imwe chete ichideredza makuru macores ekushandisa kweCPU neserver system kusvika pa15%. Izvo zviwanikwa zvinoyemurika izvo zvichaburitsa zvirinani hupenyu hwebhatiri mukufamba kwenguva.
Sekureva kweiyo yazvino beta ine chekuita, inomhanya yakanakisa pane ese ari maviri Pixel 4 XL uye Pixel 5. Zvirongwa zvinoremedza nekukurumidza uye iyo sisitimu yese inonzwa kunge isinganetsi. Iva nepfungwa kuti iyo beta isu & apos tiri kupa spin haisi & apos; haina kukwana nenzira dzipi nedzipi, saka zvinhu zvinogona kunyatso shanduka mukuburitswa mune ramangwana.
Pamusoro pezvese izvo, pane & apos; s mamiriro matsva akaiswa mu Android 12 inonzi Performance Kirasi, iyo inobatsira kuona ekumusoro-mashandiro emidziyo uye inovimbisa kuti zvinoda maficha uye mashandiro achashanda sekufunga. Performance Kirasi zvishandiso zvichafanirwa kuvhara mamwe ekumhanyisa mwero, senge kamera yekutanga latency, kuwanikwa kwecodec uye encoding mhando, pamwe nehuremu hwekurangarira saizi, resolution yesikirini uye kuverenga / kunyora kuita.
yakanakisa microsdhc kadhi ye android
renyeredzi noti 8 yemauto giredhi kesi
Iyo Samsung Galaxy S11 yatove necodename ... Uye iyo & apos; inogadzira kwazvo
Nei Siri ari kutyisidzira gehena kubva kune vamwe vashandisi ve iPhone
Sevha madhora mashanu kumatikiti emuvhi akasarudzwa paFandango uye ubhadharwe kushandisa Apple Pay
Yekutanga Nhema Chishanu dhizaini inoderedza mutengo weApple Watch SE nemadhora makumi mashanu emadhora